Fanekena endrika izay mahita amin'ny alàlan'ny sarontava
Home » Lahatsoratra mampiavaka » Fanekena endrika izay mahita amin'ny alàlan'ny sarontava
Rafitra iray ahazoana mamaky maso amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina izay afaka mamantatra ny olona manao sarontava no naparitaky ny mpampihatra lalàna sy sampam-pitsikilovana manerantany.
Novokarin'ny Corsight AI, sampana iray an'ny orinasa mpamorona solosaina any Tel Aviv, Cortica, ny teknolojia dia afaka mamantatra ireo olona ao anatin'ny hazavana maivana tanteraka koa.
Amin'ny fampiasana sary na horonan-tsary ho toy ny teboka fanombohana, ny rafitra dia afaka manondro ny olona manana 40% ny endrik'izy ireo hita maso, ka mahatonga azy io ho tena mifandray amin'ny areti-mifindra coronavirus.
"Hitako ny ankamaroan'ny mpilalao amin'ny tsenan'ny famantaran-tarehy miady amin'ny sarontava COVID-19, fa ny rafitray dia natsangana nanomboka ny Andro Voalohany mba hahafahana mamantatra ireo olona avy amin'ny ampahan'ny tarehy ihany," Ofer Ronen, filoha lefitry ny orinasa fampandrosoana ao amin'ny Corsight AI, nilaza tamin'ny The Media Line.
"Niorina hahita mpampihorohoro tokana ao anaty vahoaka izahay rehefa manandrana misaron-tena," hoy i Ronen. “Noho izany tsy mila tarehy feno isika.”
Ny ankamaroan'ny teknolojia famantaran-tarehy amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia tsy mandroso hahafantarana ny mombamomba ny olona rehefa rakotra ampahany ny tarehiny. Tamin'ny volana martsa, nanambara ny orinasa sinoa Hanwang Technology Ltd. fa namorona vahaolana ihany koa izy io izay afaka "mijery" ny saron-tava izay ataon'ny maro hanakanana ny fiparitahan'ny virus coronavirus.
Ny rafitr'i Corsight dia manodina ny fampahalalana nalaina tamin'ny fakantsary fanaraha-maso, sary ary loharanom-pahitana hafa hamoronana mombamomba ny olona iray. Maro amin'ireo mpikaroka ao aminy no mpikambana taloha tao amin'ny 8200 an'ny Israel, sampam-pitsikilovana famantarana elite an'ny IDF.
Na dia nahavita ny fampandrosoana ny rafitr'izy ireo aza ny orinasa vao herinandro vitsivitsy lasa izay, nilaza i Corsight fa efa miara-miasa amin'ny seranam-piaramanidina sy ny rafi-panjakana isan-karazany izy. Any Israel, ny orinasa dia eo am-panatanterahana fitsapana andrana any amin'ny hopitaly tsy fantatra.
"Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia tsy azonay ambara satria sampam-pitsikilovana sy vondrona mpampihatra lalàna manokana any amin'ny firenena samy hafa izy ireo," hoy i Ronen nanamarika. “Azoko lazaina fa naparitaka amina vondron-polisy marobe any Azia, Eropa ary hatrany Israel koa izahay.”
Ofer Ronen (fahalalam-pomba)
Rehefa ampifandraisina amin'ny fakantsary fakana sary mafana, ny rafitra dia afaka manampy amin'ny fanarahan-dia COVID-19 amin'ny alàlan'ny famantarana ireo izay manana mari-pana ambony amin'ny vatana ary manisy saina azy ireo hijerena ny tanana.
Raha vao voamarina fa manana tazo ny olona iray dia ampidirina ho azy eo amin'ny tahiry iray izay manangona ny toerana rehetra notsidihin'ny olona izay misy sary fakantsary fanaraha-maso. Ireo izay nifandray akaiky dia afaka nampandrenesina.
"Raha mihoatra ny 38 ° Celsius (100.4 ° F) ny maripanan'ny vatana, dia [apetraka] ho azy ao amin'ny rafitray izy ireo," hoy i Gad Hayut, talen'ny serivisy teknika ao amin'ny Corsight AI, nanazava tamin'ny The Media Line.
"Ampiarahinay amin'ny teknolojia famantaran-tarehy ity," hoy ny fanazavany, "ary avy eo, isaky ny mahita [ilay olona] ny fakantsary, dia ho fantatsika fa nandrahona izy tamin'ny fotoana iray.
Karazan-tahiry inona no tehirizina? Miankina tanteraka amin'ny mpanjifa sy ny lalàna eo an-toerana izany, hoy i Ronen, izay manamafy ihany koa fa ny Corsight AI dia tsy mifampiraharaha amin'ny lafiny data momba ny fampitoviana amin'ny tarehy. Fa kosa, ny mpanjifa, toy ny maso ivoho mpampihatra lalàna, dia manapa-kevitra hoe karazana tahiry inona no hotehirizina ary aiza.
"Manome fitaovana izahay ahafahan'ny fiasa avo lenta ary mitazona farafahakeliny ny angona voatahiry mba hanohanana ny filàna ny fiainana manokana," hoy ny nambarany. “Mety atahorana foana ny teknolojia toy izany.”
Eny tokoa, satria mihamitombo hatrany ny rafitra toy izany, manahy ny sasany fa ny fanekena ny tarehy dia azo ampiasaina amin'ny tanjona ratsy fitondran-tena ataon'ny governemanta manampahefana mba hanakanana ny vahoaka manontolo. Shina, ohatra, dia efa nampiasa an'io karazana haitao io mba hilazana ny foko Uighurs, vitsy an'isa Silamo, hoy ny tatitry ny fampitam-baovao tandrefana.
Mba hamahana ireo olana ireo, Corsight AI dia nametraka birao mpanolotsaina momba ny tsiambaratelo voaforon'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny data-privacy. Ny tontonana dia tompon'andraikitra amin'ny fankatoavana ny fifampiraharahana tsirairay isaky ny tranga.
"Tsy hivarotra amin'ny governemanta izahay [raha] tsy matoky izahay fa tsy hanararaotra ny teknolojia," hoy i Ronen nanantitrantitra, ary nanampy fa ny "hamonjy ain'olona" miaraka amin'ny rafitra matanjaka AI.
"Mety hamonjy ain'olona izany amin'ny alàlan'ny fitadiavana mpampihorohoro tokana ao amin'ny seranam-piaramanidina, toy ny fanafihana baomba tany Belzika," hoy izy, miresaka ny daroka baomba tany Bruxelles tamin'ny taona 2016 izay nahitana sivily 32 no maty ary an-jatony maro hafa naratra tamina andiana fanafihana marobe tao seranam-piaramanidina sy gara.
"Na azo ampiasaina hamonjy aina amin'ny fanekena olona marary COVID-19 eo amin'ny vahoaka, [mahita] olona iresahany sy hijerena ireo olona ireo," hoy izy.
SOURCE: The Media Line: MAYA MARGIT
Ny hopitaly Alemanina Saodiana dia niova ho Automation Anywhere